Uwe elu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Uwe elu
Ihe eji eme ka o siere gi ike
Nkọwa zuru oke nke njirimara nke osisi a jikọtara ọtụtụ mgbagwoju anya. N'ime ezinụlọ a, e nwere ma osisi dị elu ma dị ala. Osisi na lianovidny ụdị. Na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma ọ bụ ihe eji achọ mma. A maara ihe karịrị ụdị 200 nke osisi a. Ezigbo mmanụ aṅụ: ụdị dị iche iche na ụdị ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mma.
Rhubarb, iwu maka eto na owuwe ihe ubi
Rhubarb bụ ahịhịa ahịhịa nke ezinụlọ buckwheat, nke nwere ike na nnukwu akwụkwọ, nke dị na nnukwu petioles. Petioles toro ruo 80 cm n'ogologo ma ruo 4 cm n'ogo, ibu ha nwere ike iru ruo 1 n'arọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere iwu na-eto eto na owuwe ihe ubi rhubarb.
Ọ ga-ekwe omume na-eto lavender n'ụlọ, na otu esi eme ya
Lavender (lat. Lavandula) - onye nnọchite anya nke mkpụrụ osisi nke ezinụlọ yasnotkovyh (Lamiaceae ma ọ bụ Labiatae). Aha ahụ sitere na Grik. "Lava", nke pụtara "asacha", bụ eziokwu ahụ na Gris oge ochie, agbakwunyere lavender na baths. Ndị botanists na-ezo ihe dịka ụdị osisi 47 a. Lavender si Mediterranean.
Akụkụ nke Clematis Care: Ihe niile gbasara Nri na Ifuru fatịlaịza
Clematis, clematis, vine - ozugbo ha anaghị akpọ osisi a mara mma. Ị nwere ike izute ya, ma eleghị anya, na n'akụkụ ọ bụla nke ụwa. N'oge ahụ, ndị ọkà mmụta sayensị enwetala ihe karịrị ụdị 300 nke osisi a - site na ejiji, mbara ihu gosipụtara ịrị elu ala, nke a na-eji rụọ mgbidi, gazebos na ihe ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ mmiri: mejupụtara, ụdị, ngwa
Fatịlaịza, dịka potassium na sodium humate, adịwo anya ghọọ uwe ejiji. Ha dị mfe iji, mana n'otu oge ahụ dị irè. Humates - what it is Let's consider humates better and define what it is. Mkpụrụ obi bụ nnukwu ìgwè ọgwụ, a na-eji salts nke acids humic, bụ nke a na-edozi ngwa ngwa.
Fatịlaịza Nettle: osisi na-edozi ihe ọkụkụ
Taa, ụlọ ahịa ụlọ ahịa jupụtara na nri osisi dị iche iche. Mana otu n'ime ihe mgbaru ọsọ nke ndị na-elekọta ubi bụ abamuru na ọdịdị nke ndị a kụrụ n'ubi. Ọnụ ahịa nke echere site na ụlọ ahịa anaghị aba uru mgbe niile na nke a. Enwere ezigbo mma, nke kachasị ọnụ ala, ihe ọzọ - nettle fatịlaịza maka osisi.